Miino lagu aasay wadada Warshadaha oo lagu ku guuleystay in la qarxiyo – STAR FM SOMALIA
Miino lagu aasay wadada Warshadaha oo lagu ku guuleystay in la qarxiyo
Ciidamada qeybta miino baarista ee Booliska Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay qarxiyaan miino lagu aasay laamiga Wadada Warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa la sheegay inay ku wargeliyeen maamulka degmada Dayniile, markii ay arkeen miinada lagu aasay agagaarka Warshadii Birta.
Guddoomiyaha degmada Dayniile Axmed Nuur Cabdi Siyaas ayaa sheegay in ciidamada Booliska qeybta miino baarista ay la socodsiiyeen miinada, markii shacabka ay ku soo war geliyeen.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in miinadan la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka iyo ciidamada, balse wada shaqeynta shacabka ay la leeyihiin ay sababtay in la soo saaro miinada, lana qarxiyo.
Al-Shabaab ayaa horay u sheegatay inay ka dambeysay miinooyin lagu qarxiyay gaadiid ciidan oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Guddi lagula xisaabtamayo Amniga Muqdisho oo la sameeyay
Axmed Madoobe “Dagaalka Al-Shabaab looga saareyo Jubbooyinka bisha July ayuu bilaabanaya”